Iyi yemitambo muEgypt | Absolut Kufamba
Kana isu tichifunga nezve Egypt pfungwa dzedu dzinobva dzazadzwa nemifananidzo yakajairika yenyika, iine silhouette inoshamisa ye mapiramidhi kumashure. Zvisinei, tsika munyika ino yekare uye inonakidza ine zvimwe zvakawanda zvirevo. Imwe yacho ndeye yemitambo muegypt.
Classical theatre yakauya kuEgypt kubva kuvaGiriki panguva ye nguva yehusiku (pakati pezana remakore rechina nerekutanga BC). Munyika yeNairi kuratidzwa kwehunyanzvi uku kwakabatanidzwa kune dzimwe tsika dzechitendero nemhemberero dzakadai se chitendero cheosiris, nemitambo uye zviratidzo zvakatora mazuva akati wandei.
Zvisinei, tsika yemitambo munyika dzeEgypt yakanyangarika munguva dzeMiddle Ages uye haina kuzvarwa patsva kusvika pakati pezana ramakore rechiXNUMX. Kutanga kuvonga kune simba reFrance uye gare gare kune iro reBritish.
1 Kuberekwa kwemitambo yazvino muEjipitori
2 Mahara emitambo muEjipitori
3 Cairo Ongororo Yemitambo Mutambo
Kuberekwa kwemitambo yazvino muEjipitori
Mitambo yemitambo yeEuropean mavambo yakakanganiswa kuberekwa uye shanduko yazvino Arab theatre iyo yakatanga kukura muEgypt panguva iyoyo. Mumakore iwayo vanyori vekutanga vekuEgypt vakaonekwa sa Ahmed shawqi, iyo yakashandura ma comedies ekare anozivikanwa kubva munyika. Aya maitiro akange asina zvirevo zvakakura pane kufadza veruzhinji vechiArabhu, pasina zviremera zveBritish zvekoloniki zvikavapa kana nehanya zvadzo kwavari.
Tawfik al-Hakim, iye "baba" wemitambo yazvino yeEgipita
Zvisinei, inofungidzirwa kuva Tawfiq al-Hakim (1898-1987) chaizvo baba vemitambo yazvino yeIjipita, mumakore gumi ema20 ezana ramakore rapfuura. Mumakore iwayo, munyori uyu akaburitsa makumi mashanu emitambo yemhando dzakasiyana siyana. Nhasi basa rake rinofungidzirwa kuti nderechinyakare, asi achiri kuzivikanwa semunhu akakosha munhandare muEgypt.
Imwe huru chifananidzo chemitambo munyika yeNire iri Yusuf idris (1927-1991). Akapinda mutirongo kanopfuura kamwe chete uye mamwe emabasa ake akarambidzwa nehutongi hweudzvinyiriri hwaNasser. Akamanikidzwawo kubva munyika kwenguva pfupi, achitiza kumanikidza.
Mune hunyanzvi, akakwanisa kugadzirisa yemitambo muArabic mune zvese zvinyorwa zvemabasa ake uye nemutauro unoshandiswa mavari. Chimiro chake chinowanzo fananidzwa neicho chemunyori ane mukurumbira weCairo Naghib Mahfuz. Saiye, Idris akasarudzwawo weNobel Prize, kunyangwe kwaari iye haana kuwana mubairo wakamirirwa kwenguva refu kudaro, achigara pamasuwo.
Pakati pevanyori vazvino uno zvakakosha kuratidza mukadzi: Safaa tsitsi, munyori webasa rakakurumbira Ordalie / Terreur. Pamusoro pekupa kwake mupiro kunyika yemitambo, Fathy akabuda semunyori uye mugadziri wefirimu, panguva imwe cheteyo paakaburitsa zvinyorwa zvinoverengeka zvefilosofi. Kufanana nevamwe vakadzidza vazhinji vekuIjipita, akamanikidzwa kusiya nyika. Parizvino anogara kuFrance kubva kwaakashora pachena pazviitiko zvakawanda mamiriro evakadzi munyika yeIslam.
Mahara emitambo muEjipitori
Kwemakumi emakore nzvimbo iyo yaive huru chirevo chemitambo muEjipitori yaive iyo Khedivial Opera, in Cairo, yemitambo yekare kwazvo muAfrica, yakavakwa muna 1869. Makore gare gare, muna 1921, chiratidzowo zvacho Alexandria Opera Imba (yava kunzi Sayyid Darwish Theater), zvishoma zvine mwero muhukuru.
Iyo yakaisvonaka Cairo Opera Imba
Nehurombo, iyo yakaisvonaka Khedivial Opera chivakwa chakaparadzwa chose nemoto muna 1971.
Guta guru revaIjipita rakanga risina danho remitambo kusvika muna 1988, apo iyo Cairo Opera. Ichi chivakwa chinoshamisa chiri paGezira Island, paNile, mukati meZamalek nharaunda. Icho zvakare chikamu cheyakaomarara hombe, yeNational Cultural Center yeCairo uye ine nhanhatu dzemitambo, imwe yacho yakavhurika uye inokwana chiuru nemazana maviri evatariri.
Cairo Ongororo Yemitambo Mutambo
Iyo Cairo Opera Imba inogadzira gore rega Ongororo Mutambo weTheatre, chimwe chezviitiko zvakakosha zvetsika munyika uye mudunhu rese reMiddle East.
Chikwangwani cheiyo 2018 edition yeiyo Cairo Ongororo yeTheatre mutambo
Uyu mutambo unopembererwa mumwedzi waGunyana uye unotora kwemazuva gumi. Mariri, vakakurumbira vemunyika nekunze vanyori vemitambo uye makambani emitambo vanopihwa kugadzwa. Ivo vese vanogadzira akasiyana uye ane mavara mutsara-kumusoro ane akati wandei ezuva nezuva matambiro munzvimbo dzakasiyana dzemitambo.
Vatambi, vagadziri vemifananidzo, vaimbi, mamaneja ekupfeka, vatungamiriri uye vanyori vemitambo vakapihwa kuCairo Experimental Theatre Festival vanopihwa chifananidzo chinoda kuziva chinoburitsa mufananidzo we Thot kuti panguva yeIjipita Yekare yaionekwa, pakati pezvimwe zvinhu, mwari wehunyanzvi. Mufananidzo uyo unotungamira posvo unoenderana neyekuvhara gala yemutambo uyu mune yayo 2018 edition.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Iyi yemitambo muEjipitori
Iva muEjipitori kubva muna Gunyana 15 kusvika 28 ini ndoda kuziva nezvemitambo iri kuuya, makambani emitambo, mashopu emitambo, mapuroti, mamask ... ndatenda